स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ खोप लगाएकाहरू संक्रमित भए ता पनि गम्भीर समस्या नदेखिएको !!! – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : रूपन्देही/बाँके — रुघा लागेपछि बुटवलस्थित लुम्बिनी नर्सिङ होममा कार्यरत डा. प्रदीपजंग केसीले गत वैशाख २२ गते पीसीआर जाँच गराए । संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा रहेका उनले रुघा निको भइसकेको र अन्य लक्षण नदेखिएको बताए । ‘कुनै गम्भीर लक्षण थिएन,’ उनले भने, ‘परिवारका सदस्यलाई संक्रमण नहोस् भनेर सावधानी अपनाएँ ।’
उनले कोभिड–१९ विरुद्ध खोपका दुवै मात्रा लगाइसकेका छन् । कोरोना र यसको प्रभावसम्बन्धी अध्ययनका साथै विभिन्न माध्यमबाट सूचना लिने काम गरिरहेको उनले जनाए । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा फ्रन्टलाइनरमा कम संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । परीक्षणका लागि खोप ल्याइएको हो भन्ने बुझेर नलगाउँदा केही व्यक्ति प्रभावित बनेको उनले सुनाए । उनकी श्रीमती डा. नीता श्रेष्ठलाई संक्रमण देखिए पनि स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन । ‘हामीले बेलैमा खोप लगायौं र अहिले सुरक्षित बन्यौं,’ डा. केसीले थपे, ‘तर, दिनहुँ संक्रमितको पीडा देख्दा मन दुख्छ ।’
हल्का ज्वरो आउने, रुघा लाग्ने भएपछि गत वैशाख ६ गते डा. प्रशान्त आचार्यले पीसीआर परीक्षण गराए । उनलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डा. आचार्यले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने क्रममा संक्रमण पुष्टि भएको बताए । संक्रमण भएपछि होम आइसोलेसनमा बसे । ज्वरो, रुघा र शरीर दुख्ने समस्या केही दिनसम्म रह्यो । त्यसबाहेक स्वास्थ्यमा कुनै असर नपरेको उनले बताए । ‘कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाले नै सुरक्षित भएँ,’ उनले भने । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स मेलिना भूर्तेल पनि संक्रमित भइन् । तर १२ दिनमै संक्रमण मुक्त भइन् । कोभिसिल्ड भ्याक्सिनका दुवै डोज लगाएकाले आफूलाई गम्भीर लक्षण नदेखिएको चिकित्सकबाट थाहा पाएको उनले बताइन् ।
रूपन्देहीकै देवदह नगरपालिकाकी नर्सिङ अधिकृत माया पुनलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । अहिले आराम गरिरहेकी उनले आफूलाई कुनै लक्षण नदेखिएको बताइन् । ‘खोप लगाएकाले केही हुन्न भनेपछि अभिभावकमा रहने त्रास पनि हटेको छ, काममा निरन्तरता दिन सकिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । बाँकेको भेरी अस्पतालस्थित प्रयोगशाला प्रमुख प्रसन्न मिश्र स्वाब परीक्षण गर्दा सधैं पीपीई सेटमा हुन्छन् । एक वर्षदेखि यही पोसाकमा देखिन्छन् । गत वर्ष पीपीई लगाएपछि ढुक्क महसुस गर्थे । यसपालि विश्वास झन् दह्रो भएको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोपका दुवै डोज पूरा गरेकाले मनोबल बढेको उनले बताए । अहिलेसम्म ६० हजार स्वाब परीक्षण गरिसकेका उनले कोरोनाको पहिलो लहरभन्दा अहिले बढी सुरक्षित भएको महसुस गरेको बताए ।भेरी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. राजन पाण्डेले दुवै डोज खोप लगाइसकेका छन् । उपचारमा दिनरात खटिने क्रममा संक्रमित भएका थिए । करिब तीन साता आइसोलेसनमा बसेपछि निको भए ।
भेरी अस्पतालमा वैशाखयता १ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । खोप लगाएका सबैको अवस्था सामान्य छ । कसैलाई आईसीयू र अक्सिजन आवश्यक परेको छैन ।मिश्रका अनुसार खोप नलगाएका दुई स्वास्थ्यकर्मीलाई आईसीयूमा भर्ना गर्नुपरेको थियो । खोप लगाएका संक्रमित भइहाले पनि सिकिस्त नभएको उनले बताए । ‘गत वर्ष धेरै आत्मविश्वास थिएन,’ उनले भने, ‘कस्तो रोग हो ? कसरी सर्छ ? सुरक्षा कसरी अपनाउने जस्ता दुविधा र अन्योल थियो ।’ यसपालि समयमै खोप लगाएकाले ढुक्क बनाएको उनले बताए l
फिजिसियन पाण्डेका अनुसार चिकित्सा भाषामा एउटा ‘इन्फेक्सन’ र अर्को ‘डिजिज’ शब्द छन् । इन्फेक्सन भनेको कीटाणु पस्ने वा बस्ने भनेको हो । ‘डिजिज भनेको लक्षण देखाएर बिरामीलाई निष्क्रिय पार्ने भनेको हो,’ उनले भने, ‘भ्याक्सिनले बिरामीलाई निष्क्रिय हुनबाट जोगाउँछ ।’
Prevशुक्रवार ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य
Next१ दिन भित्रमा तपाइले सोचेको सबै काम बन्नेछ, यो कुरालाई बेवास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि कमेन्ट गरी शेयर गर्नुहोस्